Mpanamboatra ambongadiny vita pirinty vita pirinty Custom sy mpanome | Copak
Kopy PET natao pirinty manokana
- Order ambany indrindra 30.000 pcs
- Fanontana miloko hatramin'ny 6
- Fotoana mitarika 2-6 herinandro
- Habe azo: 2oz, 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 20oz, 24oz, 32oz
Alefaso fotsiny aminay ny fisie noforoninao na azonay atao ihany koa ny mandrafitra ny endrika fanontana ho anao.
Ny kaopy plastika mazava (polyethylene terephthalate) vita amin'ny plastika dia mora mandray amin'ny fanontana, midika izany fa afaka mahavita famaranana kalitao miavaka isika. Afaka atao pirinty amin'ny loko Pantone 1 na 2 izy ireo ary azo omena takelaka vita amin'ny mololo azo asiana domed na fisaka.
CUPON PRINTED PET CUP afaka aalefaso amin'ny mpanjifa rehetra ny anaranao. Miaraka amin'ny pirinty loko amin'ny antsipiriany sy farafahakeliny farafahakeliny, ny Brand Cafe anao dia manolotra anao fomba mamorona sy mahomby amin'ny fampiroboroboana ny marikao. COPAK'sCUPON PRINTED PET CUP dia azo ampiharina amin'ny kaopy boba ho an'ny fivarotana dite na kaopy mba hampiraisina amin'ny concoctions isan-karazany, ny fisehoan'ny kristaly mazava amin'ny kapoaka rehetra dia hanome antoka fa ny mpanjifanao manana fomba fijery tsy misy kilema ny fikarakarana manokana anao.
Momba ny COPAK
Fanandramana matihanina efa ela
Miaraka amin'ny fotoana famokarana mihoatra ny 10 taona sy mpanjifa mihoatra ny 600 avy amin'ny firenena 50 mahery, afaka mamokatra isika CUPON PRINTED PET CUP arakaraka ny filan'ny vondrona samihafa.
Tsipika famokarana mandroso
Ny orinasa dia manana alàlan'ny tsipika famokarana mandeha ho azy ho an'ny kaopy PET natao pirinty manokana. Afaka miasa miaraka amin'ny fijanonana mandritra ny volana. Ary ny injenieranay dia manana traikefa lalina.
Mihoatra ny 10 tsipika famokarana manan-tsaina mandeha ho azy, mihoatra ny 1000 taonina ny fahafaha-manao fampidirana isam-bolana. Ka ny mpanjifa mitarika ny ora filaminana dia hamafisina.
Ny milina fanontam-pirinty UV-écran antsika dia afaka manamboatra pirinty hatramin'ny 6 loko. Kopy PET natonton'ny mpanjifa mora amin'ny COPAK.
talenta mpiasa manana fahalalana matihanina manan-karena
Ny mpiasanay dia mahay mihaino, miteny, mamaky teny ary mahay manoratra amin'ny teny anglisy ary mahay ny Espaniôla sy Arabo koa. Tsy misy sakana ny serasera. Aza misalasala manatona
Teo aloha: Kitapo plastika PET 12oz vita pirinty 92mm
Manaraka: Kopa vita amin'ny plastika vita pirinty
Kapoaka PET 92mm
Kopa PET 92mm 、 Koban'ny PET 98mm 、 Koban'ny PET manokana Cup Kopa PET sy sarony 、 Koban'ny PET 、 Ambongadiny Cup Kafe PET Deli 、 Kopa PET Milkshake PET Cup Kofan'ny ampahany PET Miaraka amin'ny sarony 、 Kapezy malefaka PET 、 Koba PET vita pirinty
Kopa PET 98mm
Kopy PET manokana
Kopa sy ny sarony PET
Ambongadiny ny amboara PET
Kopa PET PET
Kopy Milkshake PET
Kofy amin'ny ampahany PET miaraka amin'ny sarony
Kopa Smoothies PET
Kitapo PET vita pirinty
Kopa Iced kafe
Kaontenera salady plastika
Cup Cup 12oz
Kitapo plastika PET vita pirinty any Sina
Cup Cup 20oz
Kaontenera Sakafo plastika azo alefa